Realme5र5प्रो: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र सुरुवात Androidsis
Realme5र Realme5Pro: ब्रान्डको नयाँ मध्य-दायरा
यी बितेका हप्ताहरू हामीकहाँ आइरहेका छन् Realme5र5Pro मा विभिन्न लीक. क्यामेराबाट तिनीहरूले प्रयोग गर्दछन् को तपाईंको ब्याट्री क्षमता, हामी ब्रान्डको यी नयाँ मध्य-दायरा मोडेलहरूको केहि विवरणहरू जान्न सक्षम भएका छौं। अन्तमा, यी दुई मोडेलहरू आधिकारिक रूपमा एउटा कार्यक्रममा प्रस्तुत भइसकेका छन्।
OPPO को उप-ब्रान्डले यस प्रकारले यसको मध्य-दायरा नवीकरण गर्दछ दुई नयाँ मोडेलहरूको साथ। रियलमी and र Pro प्रो धेरै पक्षहरूको साथ अनुपालन गर्दछ जुन हामी हाल एन्ड्रोइडमा यस मध्य भागमा छौं। डिजाइनबाट दुबै क्यामेराको छनोट गर्न।
जहाँसम्म डिजाइनको सवाल छ, ब्रान्डले हामीलाई केही आश्चर्यका साथ छोडिदिन्छ। पानीको थोपा पानीको आकारमा एक निशान यसको स्क्रिनमा छनौट गरिएको छ, यस केसमा अधिक अंडाकार, तर जसले स्क्रिनमा प्रभुत्व जमाउँदैन। साइड बेजेल पातलो छ, त्यसैले स्क्रिन एकदम राम्रोसँग प्रयोग भएको छ। प्रत्येक केसमा पछाडि चार क्यामेराहरूमा, यद्यपि प्रत्येक मोडेलको फरक फरक हुन्छ।
Realme 3i: ब्रान्डको नयाँ फोन आधिकारिक हो
1 निर्दिष्टीकरण Realme5र Realme5प्रो
निर्दिष्टीकरण Realme5र Realme5प्रो
वास्तविकता यो हो कि दुई मोडेलले हामीलाई एउटै आकारको साथ समान डिजाइनको साथ छोड्दछ, तर बिभिन्न विवरणहरूको साथ। र्याम र भण्डारण वा क्यामेराको संयोजनहरू Realme5र Realme5Pro बीच भिन्न छन्। हामी यस सम्बन्धमा स्पष्ट भिन्नता देख्न सक्छौं। त्यसैले ब्रान्डको यी दुई मोडेलहरूको पूर्ण विवरण जान्नु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं तिनीहरूलाई तल देख्न सक्नुहुन्छ:
HD + १, -०० x p२० पिक्सेलको रिजोलुसनको साथ .6,3.-इन्च IPS LCD H..6,3 इन्च आईपीएस एलसीडी २. +2.340० x p 1080० पिक्सेलको फुल एचडी + रिजोलुसनको साथ
स्नैपड्रैगन 665 Adreno 610 GPU को साथ स्नैपड्रैगन 712 Adreno 616 GPU को साथ
र्याम र भण्डारण
256GB सम्मको माइक्रोएसडीको साथ विस्तार योग्य 4GB / 64GB
256GB सम्मको माइक्रोएसडीको साथ विस्तार योग्य
१२ MP + MP MP अल्ट्रा वाइड कोण अपर्चरf/ २.२12 + २ MP म्याक्रोको साथ अपर्चरf/ २.8 + २ MP पोर्ट्रेटf/ २.2.25 अपर्चरf/ १.48 + + MP MP अल्ट्रा वाइड कोण एपर्चरको साथ MP 1.79 MP
13 सांसद १per एमपी एपर्चरf/ २.० को साथ
कलरओआरएस .9.१ को साथ एन्ड्रोइड Pie पाई कलरओआरएस .9.० र हाइपरबोस्ट २.० को साथ एन्ड्रोइड Pie पाई
आयाम र तौल
१164,4..75,6 x .9,3 198.१ x mm मिमी र १XNUMX ग्राम १157. x x .74,2 8,9. x x .184 .१ मिलिमिटर र २१XNUMX ग्राम
Quick,०5.000 m एमएएच द्रुत चार्ज VOOC m.० को साथ Quick,०4.035 m एमएएच द्रुत चार्ज VOOC m.० को साथ
जडान र ध्वनी
डुअल G जी / डुअल स्ट्यान्डबाई, वाइफाइ,, ब्लुटुथ .4.०, जीपीएस, युएसबी प्रकार सी, mm.mm एमएम ज्याक, एफएम रेडियो डुअल G जी / डुअल स्ट्यान्डबाई, वाइफाइ,, ब्लुटुथ .4.०, जीपीएस, युएसबी प्रकार सी, mm.mm एमएम ज्याक, एफएम रेडियो
पछाडिको फिंगरप्रिन्ट रिडर, Dirac HD ध्वनी पछाडिको फिंगरप्रिन्ट रिडर, Dirac HD ध्वनी
ब्राण्डले मध्यम दायराका लागि दुई धेरै पूर्ण मोडेलको साथ हामीलाई छोड्दछ। डिजाईन उस्तै हो, यद्यपि हामी यसको विशिष्टतामा स्पष्ट भिन्नता देख्न सक्छौं। Realme5केही सरल मोडल होप्रोसेसरको रूपमा स्नैपड्रैगन 655 13 को साथ। यसमा चार रियर क्यामेरा छन्, १ MP MP मुख्य सेन्सरको साथ, कृत्रिम बुद्धिमता द्वारा संचालित। फोनको ब्याट्री 5.000००० एमएएच क्षमताको छ, जसले निस्सन्देह हामीलाई राम्रो स्वायत्तता दिनेछ जब हामी यसको प्रयोग गर्नुपर्दछ, यसमा द्रुत चार्जिंग पनि छ। फिंगरप्रिन्ट सेन्सर यस अवस्थामा फोनको पछाडि अवस्थित छ।
अर्को तर्फ हामी Realme5प्रो भेट्टाउँछौं, जुन अझ धेरै पूर्ण मोडेल हो। फोनमा स्न्यापड्रैगन 712१२ प्रोसेसर छ, त्यसैले यो यसको प्रीमियम मध्य दायरा मा छ। यो चार क्यामेराको साथ पनि आउँदछ, यस अवस्थामा मात्र मुख्य सेन्सर MP 48 MP को हो, सामान्य मोडेलको विपरित, अन्य तीन अपरिवर्तित रहन्छन्। यस अवस्थामा पनि फ्रन्ट क्यामेरा फरक छ। ब्याट्री केहि सानो छ, यस अवस्थामा 4.035 mAh को क्षमताको साथ। अन्यथा तिनीहरू मतभेद बिना रहन।
सामान्य रूपमा ब्रान्डको फोनहरूमा, भारतमा प्रक्षेपण पहिलो पुष्टि भयो। यद्यपि उनीहरूसँग यस केसमा फरक रिलीज मितिहरू हुनेछन्। Realme5अगस्ट २ India मा भारत आइपुग्नेछ, जबकि प्रो मोडल मा रुचि राख्नेहरूले केहि बेर पर्खनु पर्छ। उहाँको मामलामा, यो सेप्टेम्बर on मा देश मा प्रक्षेपण हुनेछ।
प्रत्येक फोन तीन संस्करणमा आउँछ र्याम र भण्डारणको सर्तमा। जहाँसम्म र colors्गका सवालहरू छन्, हामीले हेर्‍यौं, कम्पनी बैजनी र निलो टोनप्रति प्रतिबद्ध छ, जसमध्ये केही ग्रेडिएन्ट प्रभावको साथ छन् जुन आज पनि फेसनमा छ। Realme5का तीन संस्करणहरू हुनेछन्, जसको मूल्यहरूः
/ / GB GB जीबीको मोडेलको लागत,,3rupees rupees रूपये हुनेछ (१२32 युरो बदल्नका लागि)
/ / GB GB जीबीको मोडेलको लागत,,4rupees rupees रूपये हुनेछ (१२64 युरो बदल्नका लागि)
//१4 GB जीबीको संस्करणको ११,128 11.999 rupees रूपैयाँ हुनेछ (परिवर्तन गर्न १ e१ यूरो)
Realme3Pro: स्पेनमा मूल्य र उपलब्धता
अर्कोतर्फ, हामी Realme5Pro को तीन संस्करणहरूको लागि पनि पर्खिरहेका छौं, र्याम र भण्डारणको तीन संयोजनको साथ। तपाईंको मामलामा, मूल्यहरूः
//4 GB जीबीको संस्करणको मूल्य १ 64, 13.999 rupees rupees (मूल्य परिवर्तनमा १176 युरो) छ
//6 GB जीबीको संस्करणको १ 64 rupees रूपैयाँ हुनेछ (१ 14.999 188 यूरो बदल्नका लागि)
//8 GB जीबीको मोडेलको मूल्य १०,128 16.999 rupees रुपैयाँ छ (१214eयूरो बदल्नका लागि)
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Realme5र Realme5Pro: ब्रान्डको नयाँ मध्य-दायरा
Spotify पहिले नै यसको संगीत स्ट्रिमिंग सेवाको लागि आफ्नै "कथाहरू" मा काम गरिरहेको छ
शाओमी मी T टी प्रो आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ